युनिभर्सल Baseus क्यूई कार माउन्ट वायरलेस फास्ट चार्जर किन्नुहोस् - नि: शुल्क शिपिंग र कुनै कर | WoopShop®
विशेषताहरु: चार्जिंग संकेतक संग, केबल संग, एलईडी बत्ती संग
उत्पादन को नाम: १ क्यूई वायरलेस चार्जर कार माउन्ट होल्डर मा १५W २
सामाग्री: ABS+सिलिकॉन+ग्लास दर्पण
तरीका स्थापित गर्नुहोस्: सक्शन कप + एयर भेन्ट आउटलेट क्लैम्प
को लागी सूट: 4.7-6.5 इन्च फोन वायरलेस चार्जिंग समारोह संग
सुविधा: इन्फ्रारेड सेन्सि by द्वारा स्वत: बन्द कार धारक, आईफोन Xs अधिकतम XR X 876 6s प्लस SE को लागी इन्फ्रारेड प्रेरण चार्जर, सैमसंग नोट98 S20 S10 S9 S8 प्लस को लागी फास्ट वायरलेस चार्जर, Xiaomi mi9प्रो मिक्स को लागी वायरलेस चार्जर कार3कार चार्जर, Huawei मेट 20 प्रो P30 प्रो को लागी वायरलेस कार चार्जर, क्यूई वायरलेस चार्जर, प्रेरण चार्जर, वायरलेस कार चार्जर, चार्जर वायरलेस, कार वायरलेस चार्जर, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस चार्जर कार, वायरलेस चार्जर 15w, वायरलेस चार्जर स्ट्यान्ड
नमस्कार। सेन्ट पीटर्सबर्ग को पार्सल ११ दिन मा पठाइएको थियो, जुन मलाई छिटो लाग्छ। Baseus बाट गुणस्तर, सधैं एक उच्च स्तर मा। निस्सन्देह, म सामानहरु लाई थोरै राम्रो प्याक गर्न चाहन्छु! सबै कुरा हानिकारक भयो। स्टोर को लागी धेरै धन्यवाद, सामान को तत्काल पठाउन को लागी। संसार!
यो मलाई मन पर्छ। ड्यासबोर्ड स्ट्यान्ड धेरै स्थिति सेटिंग्स छन्। स्वचालित बन्द हतियार जब होल्डर फोन राखे। सानो समस्या हो जब इग्निशन बन्द गर्नुहोस्। यो धारक हतियार खोल्न को लागी कुनै तरिका हो।
म छिटो आउँछु र यो राम्रो गुणस्तरीय मात्र कार र तयार गर्न को लागी कोशिश गर्न को लागी देखिन्छ
धेरै राम्रो र सुविधाजनक धारक। एक ठूलो प्लस यो हो कि त्यहाँ कार मा बन्धन को दुई प्रकार छन्: hinged recesses संग सक्शन कप मा र अलग डक्ट को ग्रिल मा बन्धन। रंग रोशनी सुन्दर छ र तनाव छैन।